साउन (हरियो) महिनाः एक चर्चा - Pradesh Today साउन (हरियो) महिनाः एक चर्चा - Pradesh Today
साउन (हरियो) महिनाः एक चर्चा
साउन ०२, २०७६ प्रदेश टुडे
हिजो साउने सक्रान्ति वा साउन महिनाको पहिलो दिन (१) गते वा महिनाको हिसाबले आषाढ महिनाको अन्त्य भएर आजबाट साउन सुुरु भयो । गतेको हिसाबले (३१) दिनसम्म चलेको असार महिना सिद्धिएर आज साउनको (१) गते भन्ने भयो ।
पक्षको हिसाबले हिजो दिनसम्म आषाण् शुक्लपक्ष रहेकोमा आज श्रावण कृष्णपक्ष शुरु भयो । अर्थात् हिजोको तिथि आषाढ शुक्लपक्ष पूर्णिमा तिथि थियो भने, आज श्रावण कृष्णपक्ष प्रतिपदा तिथि आरम्भ भएको छ ।
ऋतुका हिसाबले जेठ–असारसम्म चलेको ग्रीष्म ऋतु हिजोदेखि अन्त्य भएर आजदेखि वर्षाऋतु सुरु भएको छ । राशीका हिसावले हो भन्ने हो भने असार महिनासम्म मिथुन राशीमा रहेका सूर्य आज बिहानको सूर्योदयसँगै कर्कट राशीमा सरेका छन् । त्यसैले आजको यस साउने सक्रान्तिलाई कतिपयले कर्कट सक्रान्ति पनि भन्ने गर्दछन् ।
श्री सूर्यनारायण गत माघ १ गतेदेखि हिजो असार मसान्तसम्म उत्तरतर्फ रहेको र यो अवस्थामा दिन लामा र रात छोटा हुने गरेकोमा आजको दिनदेखी श्री सुर्यनारायण दक्षिणतर्फ सरेका छन् । र यो दक्षिण तर्फ सर्नेक्रम आगामी पौस मसान्त सम्म जारी रहनेछ ।
त्यतिवेला सम्म फेरी दिन छोटा र रात लामा हुँदै जानेछन् । विशेषतः प्रत्येक वर्षको असार ७ गतेलाई वर्षकै लामो दिनका रुपमा मानिन्छ । जुन दिन मान (३४) घडि (५०) पलामा हुन्छन् ।
अर्थात पूस महिनाको ७ गतेबाट दिन घट्नेक्रम बन्द हुन्छ र रात पुस १५ गतेबाट पलाका हिसावले दिन बढ्दै जान्छन् । यसरी यो संसारमा दिन बढ्ने र घट्ने तथा रात पनि बढ्ने र घट्नेक्रम चलिरहन्छ ।
विशेषतः साउने सक्रान्ति विविध पक्षले महत्वपूर्ण मानिन्छ । (६) महिने उत्तरायाम सकिएर (५) महिने दक्षिणायाम शुरु हुने आजको दिन विभिन्न कर्म र संस्कारसँग पनि जोडिएको महिना छ । आजको दिनदेखि वर्षा ऋतु शुरु हुने कारणले गर्दा र वर्षाको समयमा प्रकृतिनै हरियालीमय हुने हुँदा प्रकृतिसँग मितेरी गाँस्न वा प्रकृतिसँग साईनो लगाउन महिलाहरु हरियो पहिरनमा सजिन रुचाउँछन् ।
हरियो आफैमा तेजस्वी र समृद्धिको प्रतिक पनि हो । त्यसैले समृद्धिका लागि कर्म गर्ने जनजनले साउनको महिनालाई शिवजीको महिना पनि भन्ने गर्दछन् ।
हाम्रो धार्मिक मान्यता अनुसार शुक्लपक्ष (११) एकादशीका तिथिदेखि भगवान विष्णु क्षीर सागरमा सयन गर्ने भएकाले आफ्नो अनुपस्थितिमा सृष्टिको कार्यभार शिवजीलाई सुम्पिएर जाने र त्यसैबेलादेखि चतुर्मास शुरु हुने कथा पनि छ ।
जब भगवान विष्णु क्षीर सागरमा सयनका लागि जानुहुन्छ त्यस समयदेखि मांगलिक कर्म जस्तै विवाह लग्न, ब्रतवन्ध, लग्न, ग्रह प्रवेश (कलाचक्र) आदि जस्ता कर्महरु बन्द हुन्छन् ।
यो चतुर्मासभित्र शिवजीको पूजा, भगवान कृष्णको पूजा, सप्तऋषिको पूजा, नागको पूजा, देवीको पूजाजस्ता महत्वपूर्ण पूजा मानिन्छ । भगवान विष्णु आषाढ शुक्ल (११) एकादशीदेखि कार्तिक शुक्ल एकादशीसम्म क्षीर सागरमा सुत्नु हुन्छ र त्यही कार्तिक शुक्ल (११) एकादशीका दिन जागा पनि हुनुहुन्छ ।
यसरी भगवान क्षीर सागरमा सयन गर्न जाने दिनलाई हरीशयनी एकादशी र भगवान विष्णु जागा हुने दिनलाई हरिवोधनी एकादशी भन्ने गन्छि । यही आध्यात्मीकवादका आधारमा पर्ने चतुर्मास र यही चतुर्मासमा पर्ने साउन महिना निकै महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ ।
यो साउने सक्रान्तिलाई बताएका हिसावले मात्र होइन पर्वका हिसावले पनि मान्ने गरिन्छ । साउने पहिलो दिन यस दिन आफ्नो गृह तथा घघरलाई प्राकृतिक प्रकोप जस्तै विद्युत प्रकोप,जल प्रकोप,अग्नी प्रकोप तथा अन्य दैवि प्रकोपवाट वच्न तथा बचाउनको लागी पनि धेरै विधि र प्रकृया अपनाईन्छ ।
साउने सक्रान्तिको दिन घरमा फलहरुमा दारिम, अमिलो, कागती, ओखर, टिमुर, बेलाउती सबै हरिया जातका राखेर पूजा गर्ने, साँझमा निशाचरको पूजा गर्ने । कण्डारकको पूजा गर्ने, लुतो फाल्ने, घरमा भद्लायो पात र खरको गाँज कोचोर्ने गर्नाले वर्षाको समयमा हुने बज्रको भय, विद्युतको भय, आगोको भय हुँदैन ।
त्यसैगरी वर्षा ऋतुमा पानीमा हुने प्रदूषणका कारण तथा बाटोघाटोमा हुने हिलोको कारण मानव शरीरको छालामा देखापर्ने अनेकौँ समस्या पनि निराकरण हुन सक्ने हाम्रो धार्मिक विश्वास रहिआएको छ । वर्षा ऋतुमा आकाश बढी गर्जने, चट्याङ पर्ने, पानी र हिलोको प्रकोप बढ्ने चारैतिर हरियै–हरियो वातावरण हुने हुनाले यो सबै मौसम, समय, हावापानी तथा वातावरणको हिसावले नितान्त नौलो र फरक हुन्छ ।
गृष्म ऋतुको टन्टालपुर घाम, धुलाम्य वातावरण, सुख्खा मौसम र सङ्लो पानीको आपूर्ति हुने गर्दै गरेको अवस्थामा र प्रकृति पनि खण्डहर बनेको अवस्थामा शुरु हुने साउन महिनाले सबैमा परिवर्तन ल्याउँछ ।
साउन महिनादेखि भदौ महिनासम्म वर्षा ऋतु चल्ने भएकोले वर्षको समयमा आकाशबाट पानी परिरहने र पानीको प्रचूरता सँगसँगै प्रकृतिका हरेक झार, जंगल, बुटाबुटी पलाएर हरियो हुने र खेतबारीमा समेत अन्नबाली धान र मकैले टन्न भरिएको देखिने हुनाले यो समयलाई हरियो समय भन्नु नितान्त जरुरी छ । तर प्रकृति हरियो भयो भन्दैमा आम महिला सबै लुगा, पोते, चुरा, टिका तथा गहनासमेत हरियो लगाएर र पहिरिएर हरियो बन्नै पर्छ भन्ने कुरा कदापि सत्य होइन ।
यो परिवर्तन मानव स्वास्थ्यका लागि पनि खप्न, सहन र पचाउन निकै समस्या र गाह्रो हुन्छ । त्यसैले पनि मौसमको यो परिवर्तन मौसमको यो परिर्वनत र मौसमको यो चुनौतिलाई सहजै खप्न र थेग्न सकियो भनेर नै साउनको पहिलो दिन विशेष पूजा गरेर यसबाट बच्ने उपाय अपनाइन्छ ।
साउन महिनादेखि भदौ महिनासम्म वर्षा ऋतु चल्ने भएकोले वर्षको समयमा आकाशबाट पानी परिरहने र पानीको प्रचूरता सँगसँगै प्रकृतिका हरेक झार, जंगल, बुटाबुटी पलाएर हरियो हुने र खेतबारीमा समेत अन्नबाली धान र मकैले टन्न भरिएको देखिने हुनाले यो समयलाई हरियो समय भन्नु नितान्त जरुरी छ ।
तर प्रकृति हरियो भयो भन्दैमा आम महिला सबै लुगा, पोते, चुरा, टिका तथा गहनासमेत हरियो लगाएर र पहिरिएर हरियो बन्नै पर्छ भन्ने कुरा कदापि सत्य होइन ।
हरियो प्रकृतिलाई मान्नु । हरियो प्रकृतिलाई पूजा गर्नु, यतिबेलाका हरिया फलको पूजा गर्नु, शिवजीलाई मान्नु र शिवजीको पूजा गर्नु सत्यमा आधारित कर्म हुन् तर हरियो साउनमा हरियो हुने महिला बैशाखमा के हुने ?
जेठमा के हुने ? पुसमा के हुने, माघमा क हुने ?
बैशाख–जेठमा प्रकृति नाङ्गै हुन्छ त्यसबेला महिला के हुने ? त्यसकारण साउनलाई मात्र हरियो मानेर हरियो बन्नुपर्छ भन्नेले अन्य महिनाको पालना गर्ने कि नगर्ने ? निश्चय कुरा के हो भने भगवान विष्णुले शिवजीलाई दिएको आज्ञा र सुम्पिदिएको जिम्मेवारी अनुसार श्रावण महिनामा यो धर्ती ज्यादै सुन्दर र हराहरा हुने भएकोले भगवान शिवजीले पृथ्वीको भ्रमण गर्ने कुरा सत्य हो ।
भगवान शिवजी यस घर्तीमा झरेको र ओर्लेको बेला उनको जप, ध्यान, ब्रत, पूजा तथा उपासना गर्नाले समृद्धशाली बरदान प्राप्त हुने कुरा पनि साँचो हो । तर महिलाको रुप, स्वरुप, पहिरन र ढाँचामा हरियैँ हरियो हुनुपर्छ भन्ने कुरा नितान्त गलत हो । यो बजारमा भएका हरिया रङका पहिला सामाग्री बेचते र एक अनर्गल प्रचारबाजी हो । हल्ला हो र झुट हो ।
प्रकृति त हाम्रो देशको हरियो हो, तर चुरा हरियो कहाँको हो ? पोते हरियो, कहाँको हो ? धोती हरियो, कहाँको हो ? साडी हरियो, कहाँको हो ? चोली हरियो, कहाँको हो ? टीका र अन्य सामग्री हरियो, कहाँको हो ? यो कुरा बुझ्न सक्ने कि नसक्ने ? देश हाँक्ने अधिकार खोज्ने महिलाले प्रकृतिको स्वरुप अनुसार आफ्नो स्वरुप बनाउँछ भने त्यो पुग्न सक्छ ? त्यो सफल हुनसक्छ ? त्यो पूरा हुन सक्छ ?
साउन महिना शिवजीको भएजस्तै कुनै पनि महिना खाली हुँदैनन् ? कुनै न कुनै देवताका महिना अवश्य हुन्छन् । प्रत्येक महिनाका मास देवता र मास देवी हुन्छन् । तर यो चतुर्माैस अर्थात् चौमासाभित्रका साउन, भदौ,
असोज र कार्तिक शिवजीले विशेष जिम्मेवारी सम्हालेका महिनाहरु हुन् । स्वयम् भगवान विष्णुले शिवजीलाई आफ्नो अधिकार सुम्पिदिएर क्षीर सागरमा जानु भएको हो । बैकुण्ठमा लक्ष्मीलाई एक्लै छोडेर समुद्रमा सुत्नका लागि जानुभएको हुनाले यतिबेला लक्ष्मीसमेत विष्णुप्रति कटाक्ष हुनुहुन्छ भने धार्मिक विश्वास पनि छ ।
चौमासाभित्र पर्ने साउन महिनाको विशेष महत्व छ । यो साउने संक्रान्तिको पनि विशेष महत्व छ तर हरियो पहिरनको भने खासै अर्थ भेटिन्न र देखिन्न ? मौसमी परिवर्तनबाट बच्न र जोगिन त्यस किसिमको सुरक्षात्मक धार्मिक कर्म गर्नु नितान्त जरुरी छ ।
जस्तो कि हरियो फलको पूजा, हरियो वृक्षको पूजा, पोखरी तथा तालको पूजा, अग्नीज्वालाको पूजा, कण्डारकको पूजा, रात्रीको पूजा, भाङको पूजा अवश्य गर्नुपर्छ ।
यतिमात्र होइन हाम्रा महिला दिदी–बहिनी तथा आमाहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने साउनको महिनामा नदी तथा रजस्वला भएकी हुन्छिन् । जसरी महिला जातिहरु महिनावारी हुँदा (४) दिनसम्म अशुद्ध मानिन्छन् त्यसरी नै बग्ने पानी अर्थात् गंगा तथा नदी पनि साउन महिनाभरि अशुद्ध मानिन्छन् ।
त्यसैले यो साउनको महिनामा खोला, नदी, गंगामा नुहाउनु पुण्य हुँदैन । यो महिनामा ताल, पोखरी, कुवामा नुहाउने अति उत्तम मानिन्छ । त्यसैले यदि सक्नुहुन्छ र जान्नु हुन्छ भने साउन महिनामा सके महिनौं दिन नसके १५औँ दिन, नसके हप्तौ दिन, त्यो पनि नसके एकदिन भएपनि कुनै पवित्रा ताल, कुण्ड, पोखरी वा कुवामा स्नान गर्नुहोस् र भगवान् शिवजीको पूजा गर्नुहोस् । त्यसैगरी एकदिन आकाशे झरी अर्थात् वर्षाले पनि स्नान गर्नुहोस् । पुण्य कमाउनकै लागि गर्ने कर्म यिनै हुन् ।
हरियो पहिरनभन्दा यस्तो किसिमको स्नानमा कोटी–कोटी फल प्राप्त हुने । हामीले हाम्रो धार्मिक आस्था, विश्वास र मान्यतालाई बुझ्न सकेनौं भने कसले बुझ्नला ? देशको आधा आकाश ढाकेका नारीहरु बजारिया हल्लाको भरमा दौड्ने भन्दा खास–खास धार्मिक मान्यतालाई अंगीकार गरेर त्यसको अनुशरण गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
साउन महिनाभन्दा पहिले साउने संक्रान्तिलाई बुझौँ । त्यो भन्दा पनि चौमासा वा चतुर्मासलाई बुझौं । हाम्रा नदी र गंगालाई बुझौं । हाम्रो प्रकृति र मौसमलाई बुझौं । मासदेवता र मासदेवीलाई बुझौं ।
आफ्नो गृहाश्रम र वासस्थानलाई सुरक्षित कवचले बाँधौं । बाँध्ने विधिलाई बुझौं । अनिमात्र हामीले सेवन गर्ने खाद्यपदार्थमा मासिक विवेकको प्रयोग गरौं । मौसम अनुसार र मौसमी परिवर्तन अनुसार चलन सिक्नु नै हाम्रो बुद्धिमानी हो ।
पहिरिने हरियो कपडा तथा हरियो रङ खाने चाहिँ मूलाको चाना । यसको कुनै अर्थ छ ? हरियो लगाउनेले हरियो खान र खुवाउन पनि जान्नु प¥यो कि परेन । हेर्नको लागि र देख्नको लागि प्रत्यक्ष हरियो त धर्ती तथा प्रकृति छदैछ । खास भोग्नको लागि, खानाको लागि र शक्ति प्राप्तको लागि पनि हरियो परिकारको खोजी गरौं र खाने गरौं ।
तीर्थाटनको लागि स्वर्गद्वारी
सल्यानमा जीप दुर्घटना हुँदा २ को मृत्यु